Maxaa Kenya ku khasbay inay codsato dib u dhigista dacwadda muranka badda ee Soomaaliya? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaxaa Kenya ku khasbay inay codsato dib u dhigista dacwadda muranka badda ee Soomaaliya?
“Kenya inay tiraahdo dacwaddii aan wadnay waxaan dooneynaa in dib loo dhigo oo ay ka codsato maxkamadda waxay ka dhigantahay inay dooneyso in qaabab kale wax lagu xalliyo”, sidaas waxaa BBC u sheegay qareen Cabdiqaadir Axmed Nuur.
Go’aanka maxkamadda caddaaladda ee ICJ ay kasoo saareyso dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inuu soo baxo dhawaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in muranka ay tahay in lagu xaliyo qaab sharci ah islamarkaana laga war sugo go’aanka maxakamada.
“Madaxwayne Farmaajo dhib badan baa haysta oo ah waxa uu dhexgalay meel adag, maxaa yeelay xilligan adag oo ay dorashana soo dhawdahay shucuurta Soomaalida na ay kacsan tahay haddii lagu arko isaga oo luuqyadaas wax ku saxiixaya markaas dhib badan baa u iman kara isaga iyo xukuumaddiisa,” waxaa sidaasi yiri Prof Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha gobolka.
“Kenya waxay leedahay Afrikaannimo aan ku wadahadalno, laba dal oo daris ah ayaa nahay, dano badan baa naga dhaxeeya abaal badan baan idiinku leenahay, waxaa jira wadamo badan oo sidaasi ku kala baxay oo aa maxkamad is gaynin,” ayuu yiri Prof Cabadiwahab.
Khubarada ayaa soo jeedinaya in sida ugu sahlan ee lagu xallinkaro muranka badda uu yahay in loo daayo maxkamada oo go’aankeeda lagu kala baxo.
“Waxa la isku haysto dhul weeyaan, dhulna waa arrin xasaasi ah, kenya waxay leedahay taako dhulkeena ka mid ah kama tagayo, Soomaaliya na waxay leedahay hal taako oo dhulkeyda ka mid ah kama tagayo, marka sida ugu habboon hadda waxaa weeyaan maxkamadda adduunka ayuu kiiska yaalaa, ha ku kala baxaan kiiska,” ayuu intaa ku daray Cabdiwahab.